ရှုံးခြင်းငါးဖြာကပေးတဲ့ အိုင်းစတိုင်းရဲ့သီအိုရီ - News @ M-Media
in နှလုံးသားအာဟာရ — October 24, 2015
အောက်တိုဘာ ၂၄ ၊ ၂၀၁၅
အိုင်းစတိုင်း ဆိုတာ ကမ္ဘာကျော်နှိုင်းဆသီအိုရီ The Theory of Relativity ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သူအဖြစ် ကျနော်တို့အားလုံး သိကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူလည်း ကျနော်တို့အားလုံးအတိုင်း သူလိုကိုယ်လို ထူးမခြားနားပါပဲ။ သူ့မှာကိုယ်ပိုင် ပြဿနာတွေရှိနေတဲ့အပြင် ကျရှုံးချွတ်ယွင်းမှုတွေလည်း ရှိပါတယ်။
၁။ အိုင်းစတိုင်းဟာ တင့်တယ်လှပတဲ့လူငယ်လေးအဖြစ်ကနေ ကြီးပြင်းလာခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ သူမွေးဖွားချိန်မှာ သူ့ဦးခေါင်းနောက်စေ့ ကြီးမားလွန်းတဲ့အတွက် သူ့အဖိုးက သူ့ကို ကိုယ်အင်္ဂါပုံပန်းပျက်ပြီး ကျပ်မပြည့်သူဖြစ်မယ်လို့ ထင်ထားခဲ့တယ်။
၂။ အိုင်းစတိုင်း ငယ်စဉ်က စကားပီအောင် မနည်းပြောခဲ့ရသူဖြစ်တယ်။
၃။ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။
၄။ အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာ တက်ခဲ့တယ်။
၅။ သူ့အတွေးအခေါ်တွေကို နှစ်ပေါင်း ၃၀ အထိ ယုံကြည်သူ မရှိခဲ့ဘူး။
မိတ်ဆွေ။ အသင်သာ အိုင်းစတိုင်း ဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲ ?
အရှုံးပေး ဒူးထောက်မှာလား ?
လူတောမတိုးဘဲ ချောင်ကပ်လိုက်မှာလား ?
အိုင်းစတိုင်းကတော့ မဆုတ်မနစ် ရှေ့ဆက်ခဲ့တယ်လေ။ နောက်ဆုံးမှာ သူ့ရှုံးနိမ့် အားနည်းမှုတွေကို ကောင်းခြင်း မင်္ဂလာဖြစ်သွားအောင် ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်မယ့် ဖော်မြူလာကို ရှာတွေ့သွားပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီဖော်မြူလာက ဒီနေ့ထက်ထိ သက်ဝင် လှုပ်ရှားနေတယ် မဟုတ်လားဗျာ !